Ulcerative Colitis: New Healing Therapy Inoendeswa Yakananga KuGut
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ulcerative Colitis: New Healing Therapy Inoendeswa Yakananga KuGut
Chechipiri Genome, kambani yebiotechnology inokwirisa papuratifomu yayo sg-4sight kuti iwane nekugadzira chaiyo marapirwo uye biomarkers, yakaratidza preclinical data kubva mucosal kurapa chirongwa muchirwere chinoputika chirwere (IBD) kuCrohn's & Colitis Foundation's IBD Innovate: Kuvandudza Chigadzirwa mu. Crohn's & Colitis® virtual conference yakaitwa Mbudzi 18-19, uye yakazivisa nhengo yayo yeCorporate Circle kwenguva yemakore matatu.
SG-5-00455, Kambani inotungamira mushonga mumiriri kubva kuchirongwa chekuvandudza zvinodhaka uye biomarker muIBD, inogona kuve yekutanga mukirasi yekurapa inovandudza mucosal kuporesa muvarwere veIBD. SG-2-0776, puroteni itsva, yakagadzirwa muL. lactis drug delivery system, SG-5-00455, kuitira zvakananga, kwete-systemic kuendesa kune ura. Mucosal kuporeswa ndicho chinangwa chikuru chekurapa IBD uye parizvino inoverengerwa nevarapi sechinhu chepamusoro chisina kukwana.1
Iyo Kambani yakaunza mharidzo, "Microbial mapuroteni akapera muUC varwere vanobatana neiyo extracellular matrix uye kukurudzira mucosal homeostasis," panguva yekubuda poster chikamu munaNovember 18.